ကပ်ရောဂါကာလ မြန်မာပြည် စီးပွားရေး အကျပ်ရိုက်မှု ကြီးမား — မြန်မာဌာန
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန် တကမ္ဘာလုံး စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဟာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ညွှန်းကိန်း ၆.၈ ကနေ ဒီနှစ် ၁ . ၇ ရာခိုင်နှုန်းကို ကျဆင်းသွားတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မြန်မာဟာ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ၂၂.၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကြောင့် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့တယ်၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုက ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်တိုးလာတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က တွက်ချက်ပါတယ်။
"ဆန်က အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ ဒီအိုးထဲမှာရှိတာပေါ့နော် အခုကတော့ မရှိပါဘူး၊ တစ်ခါဝယ်စား တစ်ခါဝယ်စားပေါ့နော်"
ဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးမြို့တော်လို့ တင်စားထားကြတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က အောက်ခြေလူတန်းစားတွေ ကိုဗစ်ကာလမှာ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ ဖြစ်နေတာကို ပြောပြထားတာပါ။
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေ ပိတ်ထားလို့ အလုပ်သမားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေပြီး အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားတဲ့ Stay at Home ကာလဖြစ်နေလို့ အခြေခံလူတန်းစားတွေ စားဝတ်နေရေးအတွက် တောင့်ခံဖို့ ခက်ခဲနေပြီလို့ ရင်ဖွင့်ကြပါတယ်။
ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကို နောက်ထပ်တစ်လလောက်ပဲ တောင့်ခံနိုင်တော့မယ်လို့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဦးအာနီက ပြောပါတယ်။
"ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ ငါးရှာဖားရှာအလုပ်လည်း သိပ်မလုပ်ချင်ဘူး တောင့်ခံနိုင် တစ်လခွဲ နှစ်လပေါ့၊ ဒီလောက်ပဲ အများဆုံး တောင့်ခံနိုင်မှာပေါ့။"
ဦးအာနီ တို့ မိသားစု လက်ရှိနေထိုင်တဲ့နေရာမှာ အိမ်ငှားခနဲ့ ရေဖိုး၊ မီးဖိုးတွေ မပေးနိုင်တော့လို့ လမ်းပေါ်ရောက်မယ့် အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်နေ ဦးအာနီတို့ မိသားစုလို မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ ပုသိမ်အစရှိတဲ့ မြို့ပြတွေက လက်လုပ်လက်စားမိသားစုတွေရဲ့ ဘဝတွေက ခက်ခဲနေကြပါတယ်။
ရခိုင်လို စစ်ဘေးဒဏ်ရော ကပ်ဘေးဒဏ်ရောခံနေရတဲ့ ပြည်နယ်တွေက စီးပွားရေး အခြေအနေတွေကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
"ကိုဗစ်ကြောင့်ဆိုရင်လည်း ဒီလိုနိစ္စဓူဝပေါ့နော် တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတဲ့ မိသားစုတွေဆိုရင် တော်တော်များများက အဆင်မပြေကြဘူး စစ်တွေမြို့မှာဆိုရင် တချို့ဒုက္ခသည်စခန်း တချို့မှာဆိုရင် ကျူးကျော်နေထိုင်တချို့မှာဆိုရင် ဆန်ပြုတ်စားရတဲ့ အခြေအနေမျိုးအထိ ကြုံရတာလို့ ကျနော်တို့ အောက်ခြေမှာ သိရှိရတာပေါ့နော် အဲတော့ပြောချင်တာကတော့ ရခိုင်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးဟာ ကိုဗစ်ရော စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ရော ဒီဟာမှာတော့ အစိုးရရဲ့ပေါ်လစီကြောင့်လည်း ဆက်စပ်ပြီးတော့ စီးပွားရေးတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးသင့်သလောက် မဖွံ့ဖြိုးဘူးပေါ့နော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေများနေတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်ပေါ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ"
ဝံလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ဒါရိုက်တာ ခိုင်ကောင်းစံပြောသွားတာပါ။ ဒီဖောင်ဒေးရှင်းဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နယ်မှာ အခြေခံလူတန်းစားတွေကို အသေးစားချေးငွေ ချထားပေးတဲ့ လုပ်ငန်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံထဲကနေ ကြိုးစားရုန်းထွက်ခဲ့ရတာ တစ်နှစ်ကျော် အခြေအနေမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။
ကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ ပိုကျလာနိုင်ခြေရှိပြီး ငွေကြေး ချမ်းသာမှု ပိုပြီးကွာဟလာနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာက ခန့်မှန်းထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်းချုပ် UMFCCI ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေးက ပြောပါတယ်။
"တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေက ကျကိုကျနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်၊ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေမှာ ပြောတာကျတော့ ချမ်းသာတဲ့လူက ပိုချမ်းသာလာမယ်၊ ဆင်းရဲတဲ့လူက ပိုဆင်းရဲသွားနိုင်တယ်လို့ သူတို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ဒါလေးလည်း သတိထားပြီးတော့ ပေါ်လစီပေါ့ မူဝါဒချမှတ်တဲ့ လူတွေကလည်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးတော့ ချိန်ခွင်လျှာညှိပြီးတော့ ပေါ်လစီကို ချသင့်တယ်"
လက်ရှိမှာတောင် လက်လုပ်လက်စား အခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်းဖို့ ငွေချေးယူနေရပြီး ပြန်ဆပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမရှိ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်က လှည်းတန်းဈေးမှာ အထည် အရောင်းအဝယ်လုပ်နေတဲ့ ကိုသားကြီးဆိုသူက ရောဂါပိုဆိုးလာမယ်ဆိုရင် နောက် သုံးလလောက်မှာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တော့မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"နောက် နှစ်လ သုံးလလောက်သွားရင်တော့ ကျနော်တို့ တောင့်မခံနိုင်တော့ဘူး၊ တောင့်ခံနိုင်မယ့် အနေအထား မရှိတော့ဘူး၊ ကျနော်တို့တွေတင် မဟုတ်ပါဘူး၊ တော်တော်များများ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က တောင့်နိုင်မယ့် အနေအထားမရှိတော့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တချို့ကျတော့ ထွက်ကြတယ်၊ ထွက်တဲ့အခါမှာ လေးလပိုင်းက စပြီးကျနော်တို့ဆိုရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ စိုးရိမ်စရာ အန္တရာယ်ရှိလာတာပေါ့နော်၊ အဲအချိန်ကစပြီး တင်းကျပ်မှုတွေလုပ်တယ် အလုပ်တွေပိတ်တယ်၊ အခု ၁၂ လပိုင်းဆိုရင် ခြောက်လပြည့်ပြီပေါ့နော်၊ အလုပ်အကိုင် ရပ်ပြီဆိုတည်းက အကုန်လုံးက ရပ်သွားမယ်၊ ဘယ်သူမှ အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်"
ချေးငွေယူပြီး လုပ်ကိုင်နေရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကြွေးပိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကိုဗစ်ကာလမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမယ့် စီးပွားရေး အလားအလာတွေကတော့ ကောင်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့က ပြောထားပါတယ်။
"ကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် စိန်ခေါ်မှုတွေ ကြုံတွေ့နေရပေမယ့်လည်း စီးပွားရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလားအလာကောင်းတွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ ကျမတို့နိုင်ငံတည်ရှိနေတဲ့ အာရှဒေသဟာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အမြန်ဆုံးဒေသတွေထဲမှာ ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေလို့ ဆိုလိုရာမှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေကိုပဲ အများစု ညွှန်းဆိုလေ့ရှိကြပေမယ့် အာရှဒေသအတွင်းမှာလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေပါပြီ အာရှဒေသထဲက မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့လည်း တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။"
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဖို့ လွယ်ကူချောမွေ့မှု အဆင့် ၁၇၁ အဆင့်ကနေ ၁၆၅ အထိ အဆင့် ၆ ဆင့်အထိ တိုးလာပြီး တိုးတက်မှုအရှိဆုံး နိုင်ငံ ၂၀ စာရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လာတယ်လို့ အတိုင်ပင်ခံက ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလမှာတောင် ဂျပန်၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဆက်ရှိနေပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅. ၇ ဘီလီယံလောက်ရှိပြီး မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း MIPP အရ မျှော်မှန်းချက်ရဲ့ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ ပိတ်ထားပြီး လုပ်ငန်းအတော်များများ ရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့ အခြေအနေကြုံတွေ့နေရလို့ ဒီညွှန်းကိန်းတွေဟာ လွဲချော်နေတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေဟာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ နောက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီး ကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက် အောက်ခြေ လူတန်းစားတွေ စားဝတ်နေရေးအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်သန်းနေရပြီလို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါး အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာစိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က နဂိုတည်းက ဝင်ငွေက အနည်းဆုံးထဲမှာပါတာပေါ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာတောင် ကျနော်တို့က နောက်ဆုံးနိုင်ငံမှာဖြစ်တယ် တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေက နှစ်ထောင် ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်။ US ဒေါ်လာ ဘယ်လိုပဲပြောပြော အခု ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ ယန္တရားက မတ်လကနေ နားနေတာကြားမှာ တစ်လလောက် ပြန်ဖွင့်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ခုနစ်လလောက် လုပ်ငန်းတွေ ရပ်နေတာပေါ့နော် အလုပ်လက်မဲ့တွေ ဖြစ်သွားတယ် အထူးသဖြင့် အောက်ခြေလူတန်းစား နဂိုတည်းကိုက တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားဆိုတော့ သူတို့အတွက် သီးခြားစုဆောင်းငွေ မရှိဘူးပေါ့နော် မရှိတဲ့အတွက် အခုလိုအချိန်မှာ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်တယ်။"
ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကို ပြန်လည်ကုစားမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိ ပိတ်ဆို့ထားတာတွေကို ပြန်ဖွင့်နိုင်အောင် အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်သလို ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာ အစိုးရတစ်ခုတည်းရဲ့ စဉ်းစားချက်မဟုတ်ဘဲ အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ပိုမိုကောင်းမွန်မယ်လို့ သူကသုံးသပ်ပါတယ်။
မြန်မာဟာ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ၂၂.၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကြောင့် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်ထက် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်တိုးနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က တွက်ချက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လလောက်ဆိုရင် မြန်မာ့စီးပွားရေး တဖြည်းဖြည်း ပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ တချို့ခန့်မှန်းချက်တွေဟာ အပြုသဘောဆောင်ပြီး တကယ်အခြေအနေဟာ ဒီထက်ပိုဆိုးနေတယ်လို့ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
The Asia Foundation ရဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လစစ်တမ်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်ငန်းအားလုံးရဲ့ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ရပ်ဆိုင်းထားရပြီး ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါ အခြေအနေကြောင့် ရောင်းအားကျဆင်းနေတယ်၊ ဆက်ပြီးလည်ပတ်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း ရောင်းအား ထက်ဝက်ကျော် ကျဆင်းနေတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
စီးပွားရေးဆောင်းပါးရှင် ကိုဇေယျသူ ကတော့ ကိုဗစ်ကာလ မြန်မာစီးပွားရေး ကျပ်တည်းပေမယ့် အရင် အစိုးရလက်ထက်တွေက လောက် မဆိုးသေးဘဲ နောက်ထပ် သုံးနှစ်လောက်ဆိုရင် အခြေအနေ ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ သူက ယူဆပါတယ်။
"သူကတော့ သုံးနှစ်ပေါ့လေ နောက် သုံးနှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ကတော့ တောက်လျှောက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်နိမ့်တဲ့ နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို ရာခိုင်နှုန်း အများကြီးနဲ့ တက်နေတာပေါ့လေ ၆ ရာခိုင်နှုန်း ၇ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တောက်လျှောက် တက်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ ရိုက်ချလိုက်သလို ဖြစ်သွားတော့ ပွိုင့် ၅ တို့ ၁ ပွိုင့် ၅တို့ အဲဒါမျိုးကြောင့်ပေါ့လေ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင် နိမ့်တဲ့အနေအထားပေါ့ တခြားနိုင်ငံတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ဒီအနေအထားကတောင် မြင့်ပါသေးတယ် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ နိမ့်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကို ရသွားတာဖြစ်တယ်။ သုံးနှစ်လောက်အတွင်းမှာတော့ ကျနော်တို့ နဂိုအနေအထားကို ပြန်ရနိုင်တယ် ဟိုအရင် ကာလတွေလောက်တော့ ပြန်မရောက်သေးပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်က ရထားတဲ့ အဆင့်ကို ပြန်ဆုံးရှုံးသွားမှာ ကြောက်ရတဲ့အဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်။"
စီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့ အဓိကအနေနဲ့ ရောဂါကို တိုက်ထုတ်ရမှာ မှန်ကန်ပေမယ့် စီးပွားရေး လူမှုရေးကို ဒွန်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ သူက အကြံပြုပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါ စတင်ပျံ့နှံ့တဲ့အချိန်ကာလမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာ အခြားလုပ်ငန်းတွေထက် ထိခိုက်မှုတွေ ပိုများခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ်စည်းကမ်းတွေကို တင်းကျပ်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အစိုးရလည်း စီးပွားရေးအရ တောင့်ခံနိုင် မှာဖြစ်သလို အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်း သက်သာနိုင်မယ်လို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက အကြံပြုကြပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကြောင့် တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လူပေါင်း ၁၁၅ သန်းလောက် ဆင်းရဲမွဲတေမှု အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက် ပြောထားပါတယ်။
လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမှုတွေ ကြုံတွေ့နေရလို့ ကိုဗစ်ကာလနဲ့ ကိုဗစ်အလွန်မှာ ကျေးလက်ဒေသတွေထက် မြို့နေလူတန်းစားတွေက စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေ ပိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။